Temple Uluwatu, Bali, Indonesia " Journey-Assist - Mahaliana any Bukit
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Tempolin'i Uluwatu
Topimaso ny tempoly
Ny Tempolin'i Uluwatu (Pura Luhur Uluwatu) dia iray amin'ireo tempoly Bali manintona indrindra any Bali ho an'ireo mpizahatany. Ny anton'izany dia mitoetra eo amin'ny toerana misy an'i UluWatu - miakatra amin'ny harambato avo ambonin'ny morontsiraka, akaikin'ny deрEvushki Pecatu any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Bali - eo amin'ny Peninsula Bukit. Ny haavon'ny vatolampy dia 70 metatra mahery.
Andeha hojerentsika ny zava-misy fa eo amin'ny faritry ny tempoly sy ny manodidina azy dia miaina moka vitsivitsy izay zatra nangalatra zavatra tamin'ny mpizahatany ary namerina azy ireo fotsiny ho takalon'ny voankazo.
Aza hadino àry ny mitaona entana mora azo avy aminao. (solomaso, fakantsary, telefaona, sns.)
Zava-dehibe ara-kolontsaina sy ara-pivavahana
Niorina manodidina ny taonjato faha-XNUMX. Ity tempoly ity dia manan-danja lehibe amin'ny mpino Bali. Izy io dia iray amin'ireo toerana masina sivy lehibe ampahibemin'ny nosy, miaro ny Bali amin'ny mo mo ratsyрdemonia lanitra. Noheverina ho iray amin'ireo tempoly Zaridaina Kahyangan ("Shrines Enina eto amin'izao tontolo izao") ary natokana ho an'i Sang Khyan Vidhi Vasya amin'ny fisehoan'i Rudra.
Ny tranobe dia manana trano fivavahana anatiny, izay fady ny hiditra amin'ireo olona izay tsy milaza tena ho Hindoisma. Na izany aza, mbola mahaliana ihany eto.
Ampirisihina ho tonga ny hariva. Amin'ity tranga ity dia azonao atao ny mankafy ny filentehan'ny masoandro avy amin'ny tokotanin-tseranana akaiky, ary avy eo lasa mpijery ny fampisehoana choreografia nentim-paharazana, izay anaovan'ny mpandihy eo an-toerana ny dihy Kecak.
Misokatra isan'andro ny tempoly manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny 19. Ny fidirana ao Ulu Watu dia mitentina 30 rupe, ary raha hijery ny dihy Kecak ianao dia mila mikaroka vola 000 100.
Ulu Watu dia miorina eo amin'ny Saikinosin'i Bukit (atsimon'i Kuta), izay ampahany amin'ny faritra atsimon'i Bali. Tsy misy fitateram-bahoaka mankany, ka amin'ny alàlan'ny fiara nohofaina na bisikileta ihany no ahafahanao mandeha, na mampiasa taxi. Avy amin'ireo toerana fizahan-tany malaza (indrindra, avy any Kuta) dia misy fitsangatsanganana eto.
adiresy: Pecatu, South Kuta, Badung, Bali, Indonesia
telefaonina: + 62 361 755676
Tapakila fidirana - 30 000 ropia
Jereo ny dihy Kecak - vola 100 000
Talata - 8.00 - 19.00
Alarobia - 8.00 - 19.00
Alakamisy - 8.00 - 19.00
Zoma - 8.00 - 19.00
Sabotsy - 8.00 - 19.00
Alahady - 8.00 - 19.00
Sarin'ny Tempolin'i Uluwatu
Tempolin'i Uluwatu. Top top view
Mandihy Kecak akaikin'ny tempolin'i Uluwatu
Tempolin'i Uluwatu eo amin'ny sari-tany